Sidan ayaa shaashadda loogu qaybiyaa laba: cibaada weyn ee cusub ee Khariidadaha Google | Androidsis
Sida loo kiciyo shaashadda loo qaybiyay Khariidadaha Google: waa cibaaro aad u wanaagsan maalinba maalinta ka dambaysa
Muuqaalka Wadada ayaa lagu cusbooneysiiyay Khariidadaha Google oo leh interface cusub kala qaybsan labo taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan ku helno aragtida dhabta ah qeybta kore si loo helo khariidada qeybta hoose.
Dhamaan mid cibaaro weyn oo loogu talagalay muuqaalka wadada taasi waa in ka badan 10 sano taasna waxay leedahay keydka macluumaadka ee ugu weyn meeraheena. Aynu ku sameyno sheeko cusub.
1 Cusboonaysiinta Khariidadaha Google: hagaajinta khibrada
2 Sida loo kala qaado shaashadda laba Khariidadaha Google
Cusboonaysiinta Khariidadaha Google: hagaajinta khibrada
Cusbooneysiin ku socota Qariiradaha Google waxay keeneysaa shaashadda kala qeybsan ee Muuqaalka Wadada laba ka mid ah on Android. Qalabkan cusub ee shaashadda kala-jaban ee Khariidadaha Google ayaa la soo saaray markii aan fureyno Muuqaalka Waddada ka dib markii aan sii daynay «biinka» aan wada ognahay.
Waa in la sheegaa taas aragtida soo jireenka ah ee Muuqaalka Wadada markaan ka bilaabayno tabka aasaaska, tusaale ahaan, wuxuu ka muuqdaa shaashad buuxda, markaa aragtidan ayaa inta badan diiradda saareysa inay na caawiso markaan ku jirno muuqaalka guud ee khariidadaha.
In shaashadu waxay u kala baxdaa laba ka mid ah Khariidadaha Google iyo Muuqaalka WadadaQeybta hoose ee khariidada waxaan ku heynaa dhamaan tilmaamaha buluuga ah iyo kuwa sawirada sawirada ee ay qaadaan dadka isticmaala waxaa lagu arki karaa bar cad. Waxaan gujin karnaa mid kasta si aan toos ugu boodno goobtaas gaarka ah.
Runtuna waxay tahay shaashadan kala jaban waxay kordhisaa khibradaada Muuqaalka Wadada markii aan leenahay fallaarahaas, maxaa yeelay waxaan sameyn karnaa jahwareer weyn wakhti kasta.
Sida loo kala qaado shaashadda laba Khariidadaha Google
Astaantan cusub ee Khariidadaha ayaa noo oggolaaneysa inaan ka faa'iideysanno inta ugu badan ee waayo-aragnimada ah ee hagidda iyo isticmaalka khariidadaha, labadaba muuqaalka kore iyo Muuqaalka Wadada oo leh xaqiiqdaas la kordhiyay ee nagu hagaya goobta oo leh hageyaal. Taasi waa, xitaa markaan aragtida u qaybinno laba, waxaan awoodi doonnaa inaan "soo jiidno" shaashadda si loo weyneeyo ama loo yareeyo aragtida aag.
Waxay u egtahay isku duubnida badan ee shaashadda loo qaybiyay ee aan ku haysannay qoraallo kooban oo ku saabsan Android, laakiin ku jira hal barnaamij sida khariidadaha Google. Waan awoodnaa ballaadhi oo yaree aagga, ama si fudud ugu dhaqaaq dhinacyada si aad si fiican noogu hesho.
Sida haddii aan soo jiidno wareegyadaas ama xumbadaas aan ku arki doonno salka, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan marin u helno sawirrada FotoEsfera ee ballaarinaya aragtida ku dhowaad illaa 360 digrii.
Sidan ayaan u hawlgalineynaa shaashadda loo qaybiyay Khariidadaha Google:
Waxaan bilownay Khariidadaha Google
Waxaan tagnaa khariidada weyn oo sameyneynaa riix dheer goobta kaas oo aan dooneyno inaan ka dhex rarno ama ka baarno abka
Way soo muuqan doontaa goobta iyo aragtida thumbnail Qeybta hoose ee bidix
Guji oo aragtida kala-baxa ayaa la bilaabi doonaa shaashadda khariidadaha Google
Hadda waxaan gujin karnaa mid ama mid kale sida aan ugu baahanahay
Waan awoodnaa kaga bax bidixda tilmaanta bidixda oo ku yaal xagga sare oo xitaa wadaaga meelaha dhinaca kale kaga yaal badhanka saddexda dhibic.
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee casriga cusub ee shaashadda ku saabsan ayaa ah inaan u soconno si aad u awoodo inaad gujiso isla goobaha ama meelaha caanka ah aragtida dhabta ah ee la kordhiyay ee Muuqaalka Wadada. Waxaad arki kartaa astaamaha goobaha si aad u gujiso oo aad u bilowdo muuqaal yar oo aasaaska ah oo leh qaar ka mid ah xogteeda ugu muhiimsan.
Cusboonaysiinta Khariidadaha Google (ha moogaan midkaan noo ogolaanaya inaan sameyno waxan xiisaha leh) oo leh shaashad kala qaybsan oo leh Muuqaalka Wadada ayaa laga bilaabayaa dhinaca server-ka ee loogu talagalay dadka isticmaala Android; waxna lagama oga waxa ku saabsan kuwa iOS-ka ah, si loogu raaxeysto inta ay run tahay in desktop-ka ay awood u yeesheen inay u kala qeybsadaan shaashadda waayo-aragnimo dhameystiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo kiciyo shaashadda loo qaybiyay Khariidadaha Google: waa cibaaro aad u wanaagsan maalinba maalinta ka dambaysa
Ernesto Montenegro dijo
Sidee ufiicantahay .. war culus .. waan cusbooneysiinayaa .. aad baad u mahadsan tihiin koox
Jawaab Ernesto Montenegro
Sida loo demiyo aragtida cusub ee shabakadda tabeelleysan ee Chrome
Xiaomi Mi A3 wuxuu helayaa cusboonaysiinta Android 11 markii saddexaad